Daybọchị Na Ndụ Internetntanetị | Martech Zone
Otu Inbọchị Na Ndụ Thentanetị
Tuesday, May 7, 2013 Adam Obere
Ndị ọrụ ịntanetị 2.4 dị n'ụwa dum na 70% ha na-eji ịntanetị kwa ụbọchị. Nke ahụ bụ 37.3% nke ọnụ ọgụgụ ụwa… mmụba nke 566% kemgbe afọ 2000. Ọnụ ọgụgụ nke ngwaọrụ mkpanaka eji abanye na hasntanetị amụbawo okpukpu abụọ, yana 38% nke mmekọrịta mgbasa ozi kwa ụbọchị na smartphones. Ebe nrụọrụ weebụ ọhụrụ 139,000 na-aga n'ihu na-ezigara ozi ịntanetị 144 ijeri .68.8 88% nke ozi ịntanetị bụ spam! Google ka na-achịkwa ahịa ọchụchọ na 3.2% òkè ahịa. Ndị ọrụ na-etinye awa 4 na nkezi kwa ụbọchị ugbu a na Social Media. A na-ebugo vidiyo vidiyo otu elekere ọ bụla na Youtube, ebe a na-elele vidiyo vidiyo 133 maka awa XNUMX.
Isi Iyi: Otu ụbọchị na ndụ nke ịntanetị via HostGator
Tags: ijeri ndị ọrụ ịntanetịojiji kwa ụbọchịozi ịntanetị ezitereojiji ịntanetị zuru ụwa ọnụojiji nke ekwentị zuru ụwa ọnụojiji mgbasa ozi mgbasa ozi ụwaojiji zuru ụwa ọnụekwentị mkpanaakaeji usoro mgbasa oziọnụọgụ spamzuru ụwa ọnụ ojijiojiji nke youtube